ယူနိုကျတကျမှာ ကြောနံပါတျ (၇) ကြိနျစာ အဆုံးသတျခွငျး…. – Premier League Special
ပှဲအစ (၅)မိနဈမှာ လူကြှံထောငျခြောကျကို ကြျောဖွတျပွီး ဖူလျဟမျရဲ့ ထငျမှတျမထားတဲ့ တုံ့ပွနျပုံတှကွေောငျ့ ယူနိုကျတကျတို့ ဦးဆောငျဂိုးကို ပေးလိုကျရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ၂၁ မိနဈမှာတော့ ကာဗာနီက ရုတျတရကျရလာတဲ့ အခှငျ့အရေးကို အကောငျးဆုံး အသုံးခပြွီး ခပြေဂိုး ပွနျသှငျးပေးခဲ့တာကွောငျ့ ပထမပိုငျးမှာ တဈဖကျတဈဂိုးစီနဲ့ သရဖွေဈခဲ့ပါတယျ။
ဒုတိယပိုငျး ပှဲခြိနျ ၆၅ မိနဈမှာတော့ ဖူလျဟမျ ဂိုးစညျးအပွငျကနေ ပေါ့ဂျဘာက ဘယျခွကေနျခကျြနဲ့ ဝဝေို့ကျပွီး ကနျသှငျးခဲ့ရာမှာ ဂိုးသမား အာရီယိုလာတဈယောကျ ဘယျလိုမှ မတတျနိုငျပဲ ဂိုးပေးလိုကျရပါတယျ။ သညျ့နောကျမှာတော့ ဖူလျဟမျအသငျးဟာ ခံစဈပိတျကစားနရောကနေ တိုကျစဈပွနျလညျကစားလာခဲ့သလို ယူနိုကျတကျကလညျး ခံစဈပွနျလညျကစားခဲ့ပွီး အနိုငျ ၃ မှတျကို ရယူသှားကာ ပရီးမီးယားလိဂျအဆငျ့ ၁ နရောကို ပွနျလညျတကျလှမျးသှားခဲ့ပါတယျ။ ဒီပှဲမှယူနိုကျတကျအသငျးအတှကျ ထူးခွားမှတျတမျးတှကေတော့…
ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ဒီနှဈ ပရီးမီးယားလိဂျရာသီမှာ အရှုံးအနအေထားကနေ ရမှတျ ၂၁ မှတျထိ ရယူနိုငျခဲ့ပွီး အမှတျအမြားဆုံး ပွနျလညျရယူနိုငျတဲ့ အသငျးဖွဈပါတယျ…
ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ပွိုငျဘကျအသငျးက ဦးဆောငျဂိုးပေးပွီးမှ အနိုငျရယူခဲ့တဲ့ ပှဲပေါငျး ၉၄ ပှဲထိ ရှိလာခဲ့ပါပွီ။ ဒီမှတျတမျးဟာ လိဂျသမိုငျးတလြှောကျ မညျသညျ့အသငျးထကျမဆို သာလှနျတဲ့ နိုငျပှဲပွနျလညျရယူနိုငျစှမျး comeback မှတျတမျးလညျးဖွဈပါတယျ။
ကာဗာနီဟာ သူ့ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျသှငျးဂိုး ၄ ဂိုးလုံးကို အဝေးကှငျးမှာ သှငျးယူခဲ့တာဖွဈပွီး ဒါဟာ ယူနိုကျတကျအသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ အဖှငျ့ ၄ ဂိုးကို အဝေးကှငျးတှမှောခညျြးသှငျးခဲ့တဲ့ တဈဦးတညျးသောကစားသမားအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ယူနိုကျတကျမှာ ကြောနံပါတျ 7ဝတျဆငျပွီး ကစား သမားခဲ့တဲ့ နောကျဆုံး လေးယောကျထဲမှာ ပှဲထှကျကစားအဖွဈ (၁၂)ပှဲသာကစားရ ခြိနျမှာ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးရယူနိုငျတဲ့ ကစားသမားလညျး ဖွဈလာပါတယျ… ဒီမာရီယာ – ၂၇ ပှဲ (၃ ဂိုး) ၊ ဒီပိုငျး – ၃၃ ပှဲ (၂ ဂိုး) ၊ ဆနျးခကျြဇျ – ၃၂ ပှဲ (၃ ဂိုး) ၊ ကာဗာနီ – ၁၂ ပှဲ (၄ ဂိုး)
ဒီပှဲမှာ ပေါ့ဂျဘာဟာ အသငျးအတှကျ အရေးပါတဲ့ အနိုငျဂိုးကို ဂိုးဧရိယာထိပျကနေ ဘယျခွနေဲ့ကနျသှငျးခဲ့ပွီး ဒါဟာ ဂြူဗငျတပျဈကစားသမားဘဝတုနျးက ၂၀၁၅ ခုနှဈမှာ ခြီယဗေိုကို ဂိုးသှငျးခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ အဲဒီပုံစံအတိုငျး ဂိုးပွနျသှငျးနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဘရူနိုဖာနနျဒကျအတှကျ ဖူလျဟမျးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပှဲဟာ ယူနိုကျတကျမှာ ကစားတဲ့ ပှဲ (၅၀) ပွညျ့ခဲ့တဲ့ ပှဲဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ယူနိုက်တက်မှာ ကျောနံပါတ် (၇) ကျိန်စာ အဆုံးသတ်ခြင်း….
ပွဲအစ (၅)မိနစ်မှာ လူကျွံထောင်ချောက်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ဖူလ်ဟမ်ရဲ့ ထင်မှတ်မထားတဲ့ တုံ့ပြန်ပုံတွေကြောင့် ယူနိုက်တက်တို့ ဦးဆောင်ဂိုးကို ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၁ မိနစ်မှာတော့ ကာဗာနီက ရုတ်တရက်ရလာတဲ့ အခွင့်အရေးကို အကောင်းဆုံး အသုံးချပြီး ချေပဂိုး ပြန်သွင်းပေးခဲ့တာကြောင့် ပထမပိုင်းမှာ တစ်ဖက်တစ်ဂိုးစီနဲ့ သရေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယပိုင်း ပွဲချိန် ၆၅ မိနစ်မှာတော့ ဖူလ်ဟမ် ဂိုးစည်းအပြင်ကနေ ပေါ့ဂ်ဘာက ဘယ်ခြေကန်ချက်နဲ့ ဝေ့ဝိုက်ပြီး ကန်သွင်းခဲ့ရာမှာ ဂိုးသမား အာရီယိုလာတစ်ယောက် ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်ပဲ ဂိုးပေးလိုက်ရပါတယ်။ သည့်နောက်မှာတော့ ဖူလ်ဟမ်အသင်းဟာ ခံစစ်ပိတ်ကစားနေရာကနေ တိုက်စစ်ပြန်လည်ကစားလာခဲ့သလို ယူနိုက်တက်ကလည်း ခံစစ်ပြန်လည်ကစားခဲ့ပြီး အနိုင် ၃ မှတ်ကို ရယူသွားကာ ပရီးမီးယားလိဂ်အဆင့် ၁ နေရာကို ပြန်လည်တက်လှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှယူနိုက်တက်အသင်းအတွက် ထူးခြားမှတ်တမ်းတွေကတော့…
ယူနိုက်တက် -ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဒီနှစ် ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီမှာ အရှုံးအနေအထားကနေ ရမှတ် ၂၁ မှတ်ထိ ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး အမှတ်အများဆုံး ပြန်လည်ရယူနိုင်တဲ့ အသင်းဖြစ်ပါတယ်… ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ပြိုင်ဘက်အသင်းက ဦးဆောင်ဂိုးပေးပြီးမှ အနိုင်ရယူခဲ့တဲ့ ပွဲပေါင်း ၉၄ ပွဲထိ ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ ဒီမှတ်တမ်းဟာ လိဂ်သမိုင်းတလျှောက် မည်သည့်အသင်းထက်မဆို သာလွန်တဲ့ နိုင်ပွဲပြန်လည်ရယူနိုင်စွမ်း comeback မှတ်တမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကာဗာနီ – ကာဗာနီဟာ သူ့ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်သွင်းဂိုး ၄ ဂိုးလုံးကို အဝေးကွင်းမှာ သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒါဟာ ယူနိုက်တက်အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် အဖွင့် ၄ ဂိုးကို အဝေးကွင်းတွေမှာချည်းသွင်းခဲ့တဲ့ တစ်ဦးတည်းသောကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ယူနိုက်တက်မှာ ကျောနံပါတ် 7ဝတ်ဆင်ပြီး ကစား သမားခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံး လေးယောက်ထဲမှာ ပွဲထွက်ကစားအဖြစ် (၁၂)ပွဲသာကစားရ ချိန်မှာ သွင်းဂိုးအများဆုံးရယူနိုင်တဲ့ ကစားသမားလည်း ဖြစ်လာပါတယ်… ဒီမာရီယာ – ၂၇ ပွဲ (၃ ဂိုး) ၊ ဒီပိုင်း – ၃၃ ပွဲ (၂ ဂိုး) ၊ ဆန်းချက်ဇ် – ၃၂ ပွဲ (၃ ဂိုး) ၊ ကာဗာနီ – ၁၂ ပွဲ (၄ ဂိုး)
ပေါ့ဂ်ဘာ – ဒီပွဲမှာ ပေါ့ဂ်ဘာဟာ အသင်းအတွက် အရေးပါတဲ့ အနိုင်ဂိုးကို ဂိုးဧရိယာထိပ်ကနေ ဘယ်ခြေနဲ့ကန်သွင်းခဲ့ပြီး ဒါဟာ ဂျူဗင်တပ်စ်ကစားသမားဘဝတုန်းက ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ချီယေဗိုကို ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အဲဒီပုံစံအတိုင်း ဂိုးပြန်သွင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဘရူနိုဖာနန်ဒက် – ဘရူနိုဖာနန်ဒက်အတွက် ဖူလ်ဟမ်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲဟာ ယူနိုက်တက်မှာ ကစားတဲ့ ပွဲ (၅၀) ပြည့်ခဲ့တဲ့ ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။